बिहानै बासीमुखमा पानी पिउँदा शरीरमा यस्तो हुन्छ,अवस्य एकपल्ट पढ्नुहोस !! | सुदुरपश्चिम खबर
बिहानै बासीमुखमा पानी पिउँदा शरीरमा यस्तो हुन्छ,अवस्य एकपल्ट पढ्नुहोस !!
बिहान बासी मुखमा पानी पिउनुको फाइदाःबिहानै उठ्ने बितिकै बासी मुखमा पानी पिउनाले शरीर भित्रका अंगहरु ज्यादा सक्रिय हुने गर्दछन् जसले पाचन प्रक्रिया सहज हुन्छ भने अनुहारमा पनि चमक बढ्दछ । साथै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरभित्रका बिकारहरुको पनि सफा हुने काम हुन्छ ।पानीले रगतमा भएका वि’षाक्त पदार्थ सफा गर्छ। पानी पिउनाले नयाँ रक्त कोषिया र तन्तु बन्न मद्धत पुग्छ, जसले तौल सन्तुलित राख्न सहयोग पुर्याउँछ। जसले गर्दा हाम्रो शरीर स्वस्थ बन्न मद्दत गर्दछ ।
सुत्नुभन्दा पहिले पानी पिउनाले मुटु रोगका बिरामीहरुलाई फाइदा पुग्दछ । यसले मुटुलाई नर्मल अवस्थामा राख्नुका साथै हर्ट अट्याक बाट पनि जोगाउँदछ । नुहाउनुभन्दा पहिले एक गिलास पानी पिउनुस जसले हाइ ब्लडप्रेसर लाइ कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्दछ ।
साँझको खानाभबिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदाबिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदान्दा पहिले यदि तपाइले १ गिलास पानी पिउनुभयो भने यसले पेट भरिनेहुनाले धेरै खानाको जरुरत पर्दैन जसले तपाइलाइ शरीर मोटाउनबाट जोगाउद छ । तपाइ जुन स्थानमा भएपनि तपाइ यदि तनावमा पर्नु भयो भने तत्काल १ गिलास पानी पिउनुहोस यसले तपाइको दिमागलाई शान्त राख्न मद्दत गर्दछ र तपाइको त’नाव पनि कम हुन्छ ।
मित्रहरु पानी पिउने नियमलाई यदि तपाइ पनि सुधार गर्नु हुन्छ भने यसबाट हुने फाइदा तपाइलाइ पनि मिल्न थाल्दछ । जसले गर्दा तपाइ आफ्नो स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्नु हुनेछ । (gnewsnepal बाट सभार)
बैतडीमा जनप्रतिनिधिको हर्कत : होटेलको कोठाबाट महिलासंगै वडा अध्यक्ष नियन्त्रणमा
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुरमा जनचेतनामुलक प्रभातफेरी !!